Blog – discoverinmyanmar
မန္တလေးမြို့ကနေငါးနာရီ ကြာကားမောင်းရပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ကဆိုလေးနာရီကြာသာကားမောင်းရတဲ့မိုးကုတ်မြို့လေးဟာဆိုရင်သဘာဝအလှတရားစစ်စစ်ကိုခံစားချင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားတစ်လိုင်းတို့လည်းလက် မလွှတ်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် မိုးကုတ်မြို့ကိုအရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် မန္တလေးကလာတဲ့သူများကတော့မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကိုအရင်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ပြင်ဦးလွင်ကလာတဲ့သူများကတော့အရှေ့ပိုင်းကိုအရင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းမှာလည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေအများအပြားရှိပါတယ် – ကျောက်ပြသာင်္ဒဘုရား မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းကျောက်ပြသာင်္ဒရပ်မှာတည်ရှိပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီလာကျောက်ထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ေတာင္ေပၚကနေပတ်ဝန်းကျင်တောတောင်အလှများကိုကြည့်ရှုရင်းဓါတ်ဖမ်းလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် – ဒေါ်နန်းကြည်တောင် မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းစျေးရပ်မှာတည်ရှိပြီးနေဝင်ချိန်အလှကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်တဲ့တောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် ၊တောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးထင်းရှုးပင်လေးများလက်ဖက်ပင်ငယ်လေးများတဲ့သာယာနေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် – တစ်ကောင်းနန်းတိုင် မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံကိုရေပေးဝေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ သဘာဝအတိုင်း PH Level7ဖြစ်နေတာပါ ရေသန့်လေးနဲ့ရေကူးချင်သူများအတွက်သဘာဝရေကူးကန်ငယ်လေးများလည်းရှိပါတယ် – ရိုးရာငါးရက်တစ်စျေး မိမိရောက်တဲ့နေ့ဟာငါးရက်စျေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ရင်တော့ ရိုးရာဒေသအစားအစာကောင်းများ ကိုစားသောက်ခွင့်ရမဲ့အခွင့်ရေးပါပဲ၊သဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံထွက်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ် – ရုပ်ရှင်ရုံထာပွဲ၊ကသဲထာပွဲ ထာဆိုတာကတော့ရှမး်စကားအရကြေးဗန်းဖြစ်ပါတယ်၊ရှေးယခင်ကကြေးဗန်းများကိုအသုံးပြုပြီးကျောက်အရောင်းအဝယ်လုပ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါ်တဲ့ကျောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ညနေစောင်း၄နာရီလောက် မှာစတဲ့ကျောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ် – ပင့်ကူတောင်၊ကျောက်လက်ညှိုးတောင်၊အံဖွယ်တောင် ပင့်ကူတောင်ကတော့မိုးကုတ်မြိုအနောက်ပိုင်းဂေါင်းဦးဘာရပ်မှာတည်ရှိပြီး ကျောက်လက်ညှိုးတောင်နဲ့အံဖွယ်တောင်ကတော့အရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းကြားမှာတည်ရှိပါတယ်၊တောင်တက်တာရတာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်သင့်တော်တဲ့တောင်တွေဖြစ်ပါတယ် – တောင်ကတုံးတောင် မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းဘောလုံးကြီးရပ်မှာတည်ရှိပြီးညနေခင်းရှုခင်းလှလှကိုတောင်ပေါ်မှခံစားချင်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Read More
မြိတ်ဒေသ ရေကန်အော်ရွာမှ ထူးဆန်းသော ကျောက်နံရံပန်းချီ.. ကျောက်နံရံပေါ်က ပန်းချီကားချပ် =-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= မြိတ် ပင်လယ်ပြင်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ဆက်စပ်လျက် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ၏ အစွန်းပိုင်း တခုဖြစ်သည်။ ကျွန်းကြီး ကျွန်းငယ််များပြန့်ကြဲလျက် ငှက်သိုက် ကျွန်း များလည်းရှားရှားပါးပါး တည်ရှိနေသည်။ ရှေးက ဤပင်လယ်ပြင် တဝိုက်တွင် လူမျိုးစုံတို့ ကျက်စား ခဲ့ကြသည်။ ဤဒေသကို ယခင် က မြန်မာနှင့် ယိုးဒယားတို့ ဘတပြန် ကျားတပြန် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ် ခဲ့ကြသည်။ ပသျှူး၊ ဆလုံ၊ ဟိန္ဒူနှင့် မဟာမေဒင်ဘာသာဝင် Read More
‘ ချင်းပြည်နယ်က တိမ်ပင်လယ်ကြီးက တခြားအရာတွေ အားလုံးထက် ပိုလှ တယ်လို့ ပြောရင် မင်းယုံလိုက်ပါ ‘ တကယ်ပါ ဘာနဲ့ မှ လဲလို့ မရလောက်အောင် လှပပါတယ် ။ Mount Victoria လိုခေါ်တဲ့ နတ်မတောင် ကလဲ နိမ့်နိမ့်လေးလို့မထင်လိုက်နဲ့ နော် မြန်မာပြည်မှာ စတုတ္တ အမြင့်ဆုံးတောင် ဆိုပဲ မခေဘူးနော် ။ အမြင့်ပေက ၁၀၂၀၀ တောင် မြင့်တာ အပေါ်မှာ အေးချက်ပဲ ရေတောင် ခဲတယ် ။ ရန်ကုန်ကနေဆို Read More
ထား၀ယ်မြို့. (မှ) ရှင်ကိုးရှင် ဆိုသည်မှာ ——————————————— မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များ အများအပြား ထွက်လေ့ရှိသည့် ရှင်ကိုးရှင်သည် သမိုင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက်အထားများ နည်းပါးသော်လည်း အစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းခဲ့မှုများကြောင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ရှင်ကိုးရှင်သို့ ရန်ကုန်မြို့မှ မော်တော်ကားလမ်းအတိုင်း ၃၉၁ မိုင်ကွာဝေးကာ မော်တော်ကား၊သင်္ဘော၊ မီးရထား၊ လေယာဉ် တို့ဖြင့် သွားရောက်နိုင်သည့် ထား၀ယ်မြို့မှ တစ်ဆင့် သွားရောက်ကြရသည်။ ထား၀ယ်မြို့သည် မုတ္တမပင်လယ်အော်မှ ၁၈ ဒသမ ၆ မိုင်ကွာဝေးပြီး ထား၀ယ်မြစ်၏ မြောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ ရှင်ကိုးရှင်တွင် ရှင်ပင်ခရု၊ရှင်မုတ္ထီး၊ရှင်ဥသြနှင့်ရှင်ဓာတ်ဝဲတို့သည် ထား၀ယ်မြို့နယ်၊ ရှင်မျှော်တောင်၊ရှင်တောက်ထိန်နှင့်ရှင်ဇလွန်တို့သည် Read More
ခေါက်ဆွဲဆိုရင် 🍜ဆောင်းဦး ရှမ်းခေါက်ဆွဲ 🍜ဒေါ်နန်းပန် ခေါက်ဆွဲဆိုင်/ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း 🍜အိုက်မီး ကျိုင်းတုံခေါက်ဆွဲ/ကောက်ညှင်း/ဖက်ပွင့် 🍜ချစ်ပန် ထိုဖူးနွေး/ရှမ်းခေါက်ဆွဲ 🍜ရွှေညောင်ပင် ကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ 🍜ကျိုင်းတုံ ကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ/ အမဲသားခေါက်ဆွဲ 🍜ထိုဖူးနွေး ဆိုင်တိုင်းနီးပါးကောင်း 🍜ဒေါ်ထွမ်း ခေါက်ဆွဲဆိုင် 🍜သီပေါ မနန်းဌေး (ခေါက်ရှဉ့်/ကြက်သားပေါင်းထုပ်/ထမင်းဝါ) လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုရင် ☕တောင်ကြီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ☕တော်ဝင်ပုလဲနှင်းဆီ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ☕Heart Rock cafe ☕Rich coffee(စူဏမုနိ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်) ☕Aurora လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ☕ယုဒဿာန် Coffeeဆိုင် (စိုင်းစိုင်းထိုင်နေကျဆိုင်) ☕မေမြို့ ကော်ဖီ/နံပြား/မလိုင်/ပူရီ Read More
သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ ရာဇဝင်ထဲက ရေးမြို့
January 12, 2020 January 12, 2020 History and Culture, Local Food, Mon
ရေးမြို့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၂၀၀ ခန့်ထဲက ထားဝယ်ဒေသမှ မာယာဒေဝီ မင်းသမီးကတည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပီး ၊ ဓမ္မစေတီမင်းမှ လည်း ပြန်လည် ပြုပြင်ခဲ့သော ရှေးဟောင်း မွန်မြို့တော် အဖြစ် ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးဟောင်းမွန်မြို့တော်အဖြစ် ရှေးဟောင်း မြို့ရိုးများနဲ့ ကျုံးတော်ကြီးက သက်သေခံလျက်ရှိပါတယ်။ ​ရေးမြို့ကို မွန်လို (အသံထွက်) ဒိန်းရီ ဟုခေါ်ဆိုပီး မြန်မာလို ဆိုရင် စကား မြို့ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ စကားဟုအမည်တွင်ရခြင်းမှာလည်း ရှေးယခင်က မင်းညီမင်းသားများ ၊ စစ်သူကြီးများ ၊ Read More
Nine (9) wonders of Shwedagon Pagoda
January 10, 2020 January 10, 2020 History and Culture
1.Tawagu Wish-Fulfilling Buddha (or) Patamyar Myat Shin Buddha It is located at the east of upper terrace of Shwedagon Pagoda. In ancient time, the warriors are prayed to win before they approach the battle and it happened. Buddhism people believe that Read More
1.Mandalay Hill Mandalay Hill isa240 metres (790 ft) hill that is located to the northeast of the city centre of Mandalay in Myanmar. The city took its name from the hill. Mandalay Hill is known for its abundance Read More
January 9, 2020 January 9, 2020 History and Culture
1. Shwedagon Pagoda The Shwedagon Pagoda also known as the Golden Pagoda, isagilded stupa located in Yangon, Myanmar. The 326-foot-tall (99 m) is situated on Singuttara hill. Shwedagon Pagoda is the most sacred Buddhist pagoda in Myanmar. The Stupa Read More
January 6, 2020 History and Culture, Sagaing
Nestled along the western bank of the Irrawaddy River is the Hsinbyume Pagoda. This structure is so white visitors will find themselves not wanting to climb on it, as the pristine structure seemingly gleams from afar. No pagoda is more Read More